प्रेम सम्बन्ध किन टुट्छ ? |
प्रेम सम्बन्ध किन टुट्छ ?
On: २०७६ असार ९ गते, सोमबार, ०१:५६ बजे प्रकाशित
काठमाण्डौ । एक अर्काप्रति आफ्नो भावना कहिले पनि नबदल्ने सोचेर नै कुनै पनि एक महिला र पुरुष विवाह बन्धनमा बाँधिने गर्दछन् । तर समयसँगै हामी परिवर्तन हुन्छौँ र हाम्रो सम्बन्ध पनि । सम्बन्ध स्थिर नै हुँदैन ।
परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नसके मात्र मानिसहरुको सम्बन्ध सुमधुर हुने गर्दछ । यदि यसलाई नबुझेमा पुरै सम्बन्ध नै टुट्न सक्छ ।
विवाह केवल दुई व्यक्तिसँग जीवन बिताउने मात्र नभई एक अर्काबिच सुमधुर सम्बन्ध बाँध्ने मौका पनि हो । तर आजकाल वैवाहिक बन्धनको उमेर कम भइरहेको छ र सम्बन्ध बिच्छेदको घटनाहरु निकै सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यसको पछाडि केहि ठोस् कारणहरु पनि रहेका छन् । जसरी समयसँगै व्यक्तित्वमा परिवर्तन आउने गर्दछ त्यस्तै गरि हाम्रो इच्छामा पनि परिवर्तन आउने भएका कारण हामी एक अर्काप्रति प्रेमको अभिव्यक्तिमा पनि परिवर्तन पाउने गर्दछौँ ।
हामी यस्तै भ्रमका कारण दुखी हुन्छौँ तर आफू दुखी भएकोमा अरुलाई दोषारोपण गर्ने गर्दछौँ । समय परिवर्तशील छ भन्ने उक्तीलाई आत्मसात गर्न नसकेका कारण धेरैजसो मानिसहरु दुःखी हुने गर्दछन् जसले प्रेम सम्बन्ध टुट्ने गर्दछ । (एजेन्सी)
२०७६ असार ९ गते, सोमबार, ०१:५६ बजे प्रकाशित